'सलमान' बलिउडकै महँगो नायक !
‘सलमान’ बलिउडकै महँगो नायक !
पुस १८, एजेन्सी
बलिउडका दबंगस्टार सलमान खानको चर्चा भईनै रहन्छ । आकर्षक फिजिकल भएका सुन्दर सलमान खान उमेरले हालसालै मात्र ५२ वर्षमा लागिसकेका छन् । बलिउडका यी ५२ वर्षिया दबंग खानको यतिबेला चर्चा माथि चर्चा बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत डिसेम्बेर २२ अघि मात्र प्रदर्शनमा आएको सलमान अभिनित चलचित्र ‘टाइगर जिन्दा हे’ले बक्स अफिसमा रेकर्डतोड कलेक्सन गरिरहेको छ । अहिले पनि प्रदर्शनकै क्रममै रहेको यो चलचित्रले ९ दिनमा २३२.५२ करोड कलेक्सन गरिसकेको छ । यो कलेक्सन ओभरसिज कलेक्सन बाहेकको हो ।
हालै मात्र भारतीय मिडियाहरुले बताए अनुसार सलमानले ‘टाइगर जिन्दा हे’को लागि १५० करोड पारिश्रमिक लिएको बताइएसँगै सलमान यतिबेला बलिउडकै महँगो नायक बनेका छन् । लागातर सुपरहिट फिल्म दिएका सलमानले यसअघिको फिल्म ‘ट्युवलाईट’मा भने असफलताको स्वाद चाख्नु परेको थियो तर सलमानलाई यसले कुनै असर नगरेको कुरा ‘टाइगर जिन्दा हे’ले साबित गरिसकेको छ ।
यसराज फिल्म्स्को व्यानरमा निर्माण भएको ‘टाइगर जिन्दा हे’ फिल्म व्यानरकै लागि हालसम्म निर्मित सबैभन्दा महँगो चलचित्र भनेर बताईएको थियो । र चलचित्रले पनि लगानी अनुसारको सफलता हाँसिल गरेसँगै चलचित्रका हरेक पात्रहरुले दर्शकबाट निक्कै प्रशंसा समेत पाएका छन् । आम्दानिको आधारमा ‘फोर्ब्स म्यागजिन’ले सन् २०१७ मा सबैभन्दा धेरै कमाई भएको प्रकासित सुचिमा बलिउड कलाकारको रुपमा सलमान रहेको थियो ।